It is me. Ko Niknayman.: မြန်မာပြည်တွင်းမှမိတ်ဆွေများ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများအား ယခုလို ကြည့်နိုင်ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင်းမှမိတ်ဆွေများ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများအား ယခုလို ကြည့်နိုင်ပါသည်။
နအဖမှ Youtube အား ပိတ်ထားသော်လည်း http://www.autobypass.com/ မှတစ်ဆင့် ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းအမည်များအောက်တွင်ဖေါ်ပြထားသော ၀က်ဆိုဒ်လင့်အား click လုပ်ပါ။
၁။ သက်ဆိုင်ရာ url address ကို (ctrl + C နှိပ်ပြီး ) copy အရင်လုပ်ယူ ပါ။
၂။ ထို့နောက် သက်ဆိုင်ရာ video ၏ link အပေါ်တွင်click လုပ်ပါ။ bypass homepage သို့ ရောက်ပါမည်။
၃။ Box အတွင်းမှ http://www.myspace.com/ နေရာတွင်..ctrl + V ကိုသုံး၍ အစားတိုးပြီး bypass ကိုClick လုပ်ပါ။.
၄။ home page ၏ အပေါ်ဆုံးတွင် Current URL address box ပေါ်လာပါမည်။.တဖန် bypass ကို Click ထပ် လုပ်ပါ။ youtube video ကိုကြည့်နိုင်ပါပြီ။
Myanmar : Heaven & Hell 2
Myanmar : Heaven & Hell 3
Myanmar : Heaven & Hell Tribute Video
8888 Recall Finale
Crackdown on Peaceful Protest
8888 Uprising song (Burma)
Embassy Demo http://www.autobypass.com/index.php?a=aHR0cDovL3lvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MkdWeDRiWlBpNUE%3D
Peaceful Demonstration in Myanmar being cracked down
Myanmar8888(Demo,Ministry of Foreign Affairs,Japan30-8-2007)
Burmese Activists protest in Bangkok
Refugees escape Myanmar - 30 Aug 07
Who really killed Aung San? Vol 2
Who really killed Aung San? Vol 3
Who really killed Aung San? Vol 4
Who really killed Aung San? Vol 5
Army Crackdown (Burma 22/08/07)
Ko Htin Kyaw's Protest on 25th Aug 2007
Demonstration in Malaysia (Aug 24th 2007)
U Ohn Than's Solo Protest
Walk on August 22nd in Burma
Myanmar protests continue
Peaceful Walking in Burma
Burmese democracy icon Suu Kyi honoured with "Netaji Subhas
An exclusive interview with Aung San Suu Kyi, Part (A)
An exclusive interview with Aung San Suu Kyi Part (B)
Aung San Suu Kyi - Nobel Peace Prize Ceremony
Daw Aung San Suu Kyi's campaign trip speech in Kyatpyin 2003
Daw Aung San Suu Kyi's Speeches in Burmese language
Daw Aung San Suu Kyi's speech, 1996
Thank You For Your Support Assk (Aung Saan Suu Kyi)
Daw Aung San Suu Kyi and ASEAN.
8888 uprising documentary Part 1
8888 uprising documentary Part 2
Evil - The Nation - Destroyer
Dedicated to whom sacrifice their lives for Freedom
8.8.88 - Kabar Ma Kyay Bu Heyt!
Sacrifice for Belief
Posted by Ko Niknayman at 6:41 AM
နစ်နေမန်းဘလော့နှင့် ပိတ်ထားသောအခြားဘလော့များ ၀က်ဆိ...
ပြည်တွင်းမှ ကြည့်ရှုခွင့် မရရန် နအဖမှ နစ်နေမန်းဘလေ...
ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများက သက်သေပြလို့ နေပါတယ်။ ပြည်သူ ...
သံဃာတော်များနှင့် မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြ ...
ဒီည (၈)နာရီမှာ လုပ်ဆောင်ကြဖို့ ။
သံဃာထုကြီး. မိန့် မှာ ပန်ကြားချက်အပေါ် မကဒတမှ ထပ်လေ...
ဦးစီးချုပ်က လုယက်သူ၊ သမီးတွေက ဓါးပြ။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ ချု...
နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများသို့ လျှောက...
အာဏာရှင် သက်တမ်းရှည်လေ.. ကိုယ့်သားသမီး ကျွန် ပိုဖြ...
ဒါမျိုး ခွင့်ပြုသင့်သလား၊ ခွင့်လွှတ်သင့်သလား။
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ ကြီး၏ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ပွ...
စစ်တွေမြို့ အတွင်း (နအဖ)မှ သံဃာ့တပ်မတော်ကဲ့သို့ဖ...
မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို တိုင်းပြည်အတွင်းမှ သံပုံးတီးေ...
မမေဓါဝီအား လေးစားဂုဏ်ပြုပါတယ်။ အမှန်ကို လက်မခံတဲ့ ...
သင့်ရဲ့အင်တာနက် လုံခြုံရေးကို အထူးသတိထားပါ။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့မှ ...
တာဝန်သိ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦီးထံမှ အိတ်ဖွင့်ပေ...
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသေ...
ပြည်သူတဦးမှ ပြည်သူများသို့ ပန်ကြားချက်
လျှို့ ဝှက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း